Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madoobe oo Shaaca ka qaaday inuu Baarlamaanka kulmi doono. | JILYAALE_ONLINE
Hase ahaatee Sheikh Aadan Madoobe ayaa u sheegay Mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka in maalinta sabtida ee soo socota kama dambeys ay dhici doonto Kulanka Baarlamaanka, inkastoo aanay ilaa iyo hada dhameyn kooramka Baarlamaanka ku fariisan karo, maadaama tiro badan oo Xildhibaano ay ka maqan yihiin Magaalada Baydhabo.
Sheikh Aadan Madoobe ayaa mar kale ku celiyay in xildhibaanada ka maqan Magaalada Baydhabo ay dib ugu soo laabtaan, si loo ambaqaado howlo Baarlamaanka u yaala, taasoo ka mid tahay arrimaha khilaafka ee Madaxweyne Yusuf iyo Ra’iisul wasaarihiisa iyo Heshiiskii awood qeybsiga jabuuti.
Sida lagu soo warramay guryaha ay degan yihiin Madaxweynaha, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa aad u mashquul ah, waxaana ka dhaca daqiiqad kasta kulamo Siyaasadeed oo dhex maraya Madaxdaas iyo xubnaha Baarlamaanka, iyadoona sida muuqato uu jiro loolan siyaasadeed oo ku wajahan dhinaca awooda baarlamaanka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Sheikh Aadan Madoobe oo gacan ka taagtay xalinta khilaafka Labada Mas’uul ayaa isna dhinaciisa waxaa uu ka wadaa kulamo xasaasi ah oo ku qotoma sida laga yeelayo khilaafka oo haatan usoo biyo shubtay dhinaca Baarlamaanka.
Hase yeeshee ma cada halka ay guusha raaci doonta, ma waxaa lagu kala bixi doonaa fadhiga Baarlamaanka mise si hoose ayay isu xalin doonaan Madaxda Dowladda KMG ee khilaafka ka dhaxeeya erayadaas iyo kuwa kaleba waxay ka mid yihiin waxyaabaha looga hadlayo kulamada Siyaasadeed ee ka socda Magaalada Baydhabo.
Uga dambeyntii waxaa maalmaha soo socda la kala ogaan doonaa xaaladda ka dhex taagan Madaxweyne C/llaahi Yuusuf iyo Ra’iisul Wasaare Nuur Cadde halka ay ku biyo shuban doonto, waxaana Labada Mas’uul ay wadaan kulamo ay ku soo jiidanayaan Xildhibaanada Baarlamaanka si midba midka kale uu kalsooni buuxda uga heli hadii ay ku tartamaan awooda Baarlamaanka.
← Gudoomiyaha Isbaheysiga Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo xubno uu hogaaminayo oo ka soo degay magaalada Muqdisho.
Koobkii kubadda Cagta ee Ciidul Adxaa ee ay Shirkadda Kaah Express ku qabatay wadanka Koonfur Afrika. →